दुबईकी राजकुमारी जसलाई बाबुले नै ‘जेल’ मा राखेका छन् – Dainiki Sarokar
दुबईकी राजकुमारी जसलाई बाबुले नै ‘जेल’ मा राखेका छन्
२०७७ फाल्गुन ५, बुधबार ०८:५६
काठमाडौं । उनी दुबईका शासक र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)का उपराष्ट्रपतिकी छोरी हुन्। राजकुमारी भएपछि उनले जिन्दगीमा सबै सुख-सयल पाउनु पर्ने हो तर उनी २ वर्षदेखि बन्द कोठा छन्। दुबईका शासक शेख मोहम्मद बिन रसिद अल मकतुमकी छोरी ३५ वर्षीय लतिफा अल मकतुमले सन २०१८मा दुबईबाट भाग्न कोशिश गरेकी थिइन्। यसरी देश छोड्न प्रयास गर्ने उनी मुकतमकी दोस्रो सन्तान हुन्। ६ जना श्रीमतीबाट मुक्तमका ३० छोराछोरी भएको बताइन्छ।
‘मैले बाथरूममा यो भिडिओ बनाइरहेकी छु किनकी यहाँमात्र म ढोका लगाएर बस्न सक्छु। म बन्धक बनाइएकी छु। स्वतन्त्र छैन। यो जेलकी कैदी हुँ। मेरो जीवन मेरो हातमा छैन,’ उनले भनेकी छन्।
प्रहरीहरूले आफूलाई जिन्दगीभर यहीँ बस्ने पर्ने भनेको उनले बताएकी छन्। ‘मलाई थाहा छैन। अब मैले फेरि सूर्य देख्न पाउँछु कि पाउँदिनँ,’ लतिफाले भिडिओमा भनेकी छन्।
७१ वर्षीय मुकतम संसारका अर्बपति शासकहरूमध्ये पर्छन्। उनको सम्पत्ति ४ अर्ब अमेरिकी डलर छ। संसारकै सबैभन्दा भवन बुर्ज खालिफा उनैले बनाउन लगाएका थिए। उनका दुबई होल्डिङलगायत कम्पनीहरू छन्।
दुबईले भौतिक विकासको शिखर चुमे पनि त्यहाँका महिलाहरूले भने नैसर्गिक अधिकार पनि उपभोग गर्न पाएका छैनन्। यसअघि मुकतमकी श्रीमती हाया आफ्ना दुई सन्तानसहित भागेर बेलायत पुगेकी थिइन्। एजेन्सी ।
घट्याे सुनकाे भाउ, कति छ त आजकाे मुल्य ?
गर्भ नरहने गरि याैन सम्पर्क कसरी गर्ने ? जानी राखौं स्वास्थ्य टिप्स